Chinese EV Maker Nio Surges on Funding Talks with Hefei Govt | Myanmar Business Today
Home Business Regional Chinese EV Maker Nio Surges on Funding Talks with Hefei Govt
The NIO Inc. ES6 electric sport utility vehicle (SUV) stands on display at the Auto Shanghai 2019 show in Shanghai, China, on Tuesday, April 16, 2019. Qilai Shen | Bloomberg | Getty Images
Shares in China’s Nio Inc. surged more than 30 percent after it signed framework agreements with Hefei’s city government onafundraising of more than 10 billion yuan ($1.42 billion) and new manufacturing facilities.
Under cash flow pressure, Nio said in May last year it would formajoint venture with Beijing E-Town International Investment and Development, which will invest 10 billion yuan in the new entity. There has been no further announcements on the deal.
Vehicle sales in China fell 18 percent in January while sales of battery electric and other so-called new energy vehicles plunged 54.4 percent, preliminary data from the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) showed.
တရုတ်နိုင်ငံ Nio Inc ၏ ရှယ်ယာများသည် ဘဏ္ဍာငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ဒသမ ၄၂ ဘီလီယံနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံအသစ် များ တည်ဆောက်ရန်အပါအဝင် မူဘောင်သဘောတူညီချက်များကို ဟဲဖေအစိုးရနှင့် လက်မှတ်ထိုးပြီးနောက် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းမျှပင် တိုးတက်လာခဲ့သည်။
ငွေအိပ်နေသော လျှပ်စစ်ကား ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း Nio သည် နောက်ထပ် Tesla Inc ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လာရန် တစ်ပြေးသော တရုတ်လျှပ်စစ်ကားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအနက် အလားအ‌လာအကောင်းဆုံးလည်းဖြစ်သည်။
လျှပ်စစ်ကား ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအားလုံးမှာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ‌မော်တော်ယာဥ်ဈေးကွက်ဖြစ်သည့် တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ ဝယ်လိုအား ကျလာခြင်း၊ အစိုးရဘက်မှ အမတော်ကြေးပေးနေခြင်းများလည်း လျှော့ချလာခြင်းကြောင့် ထိခိုက်နေသည်။
အရှုံးပေါ်နေသည့် Nio သည် ‌သုတေသနစင်တာများနှင့် မော်တော်ယာဥ် စက်ရုံများ တည်ဆောက်ရန်အတွက် ဟဲဖေးမြို့အစိုးရနှင့် ဆွေးနွေးနေသည်။
Nio အနေဖြင့် အသေးစိတ်ကို လာမည့် နှစ်လအတွင်းတွင် ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကုမ္ပဏီက ပြောကြားထားသည်။
ငွေကြေးလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ဖိအားများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော Nio သည် ၎င်းအနေဖြင့် Beijing E-Town International Investment and Development နှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြီးခဲ့သည့်နှစ် မေလတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ Beijing E-Town International and Development သည် Nio နှင့် အကျိုးတူတည်ထောင်သည့် ကုမ္ပဏီတွင် ယွမ် ၁၀ ဘီလီယံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်တွင်တော့ ကုမ္ပဏီနှစ်ခု သဘောတူညီချက်နှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ် ကြေညာချက် တစ်စုံတစ်ရာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိပေ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ရှာဖွေနေသည့်အတွက် ငွေထွက်လမ်းကြောင်းကို လျှော့ချရန်ကြိုးပမ်းသည့်အနေဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်များလည်း လျှော့ချခဲ့သည့်အပြင် ငွေချေးစာချုပ်များလည်း ထုတ်ရောင်းခဲ့သည်။
SOURCEYilei Sun and Brenda Goh(Reuters)
Previous article$43 Million Thanlyin-Thilawa Road Now Open
Next articleIndia Chicken Sales Slashed by False Virus Rumor